बैतडी दुर्घटना : आफन्तले विमलालाई सुनाउन सकेका छैनन्– ‘तिम्रा श्रीमान् रहेनन् !’ – Dainik Sangalo
बैतडी दुर्घटना : आफन्तले विमलालाई सुनाउन सकेका छैनन्– ‘तिम्रा श्रीमान् रहेनन् !’
November 13, 2020 472
धनगढी — बैतडीको पाटनमा केही बेर रोकिएपछि बस खोड्पेको उकालो चढ्न थाल्यो । राति दस बज्नै लागेको थियो । यात्रु कोही सिटमै निदाउँदै त कोही झकाउँदै थिए ।
बैतडीमा बिहीबार राति भएको बस दुर्घटनाकी घाइते विमला कुँवर धनगढीस्थित मायामेट्रो अस्पतालमा । तस्बिर : मोहन बुढाऐर
२ नम्बर सिटमा बसेका २० वर्षे पुरन टमाटा एयर फोन लगाएर गीत सुनिरहेका थिए । अचानक बस गड्याङ–गुडुङ गर्न थाल्यो । उनले आँखा खोले, बस भिरबाट खस्दै थियो । गुल्टिँदै गरेको बसबाट कतिखेर बाहिर आइपुगे, उनले पत्तै पाएनन् । उनी भिरमा अड्किएका थिए ।
‘आफूलाई हेरेँ, ठिकै छु जस्तो लाग्यो अनि झुरुक्क उठेँ,’ उनले भने, ‘गोजी छामेँ, मोबाइल त्यहीँ रहेछ । कसलाई फोन गरौं, एकछिन अलमलिएँ । तुरुन्तै पुलिसको सय नम्बर डायल गरेँ ।’
केही बेरमै बैतडी पुलिस घटनास्थल आइपुग्यो । त्यति बेलासम्म टमाटा सडकमा उक्लिसकेका थिए । उनको टाउकोमा समान्य चोट लागेको छ । उनलाई अहिले सिटीस्क्यानका लागि धनगढी माया मेट्रो अस्पतालमा ल्याइएको छ । बुबाको निधन भएकाले गत असोजमा घर आएका उनी काठमाडौं फर्कंदै थिए ।
बैतडीको दुर्गम बस्ती दोगकेदार गाउँपालिकाको सेलनीकी २४ वर्षीया विमला कुँवरले पनि होस खुल्दा आफूलाई भिरालो जमिनमा पाइन् । पतिसँग माइतीघर कञ्चनपुरको बेलौरी आउँदै गरेकी उनी निदाउने सुरसारमा थिइन् । काखमा डेढवर्षे बच्चा दूध चुसिरहेको थियो । बस कतिखेर खस्यो, उनले पत्तै पाइनन् ।
होस खुलेपछि उनले वरिपरि हेरिन् । बच्चा नजिकै रोइरहेको थियो । उसको टाउकोबाट रगत बगिरहेको थियो । उसलाई झटपट काखमा च्यापिन् । अनि पतिलाई खोज्न थालिन् । घटनास्थलमा कोलाहल मच्चिरहेको थियो । घाइतेहरूले रोई–कराई गरिरहेका थिए ।
केही बेरमा उद्धार टोली आएर विमलालाई रोडसम्म ल्यायो । अहिले उनीसँगै बच्चालाई उपचारका लागि धनगढीको मायामेट्रो अस्पताल ल्याइएको छ । अस्पतालको शय्याबाटै उनी ‘मेरो श्रीमान् खोइ’ भन्दै खोधखोज गरिरहेकी छन् । तर, उनलाई आफन्तले भन्न सकेका छैनन्– श्रीमान् करनसिंह ऐडीको घटनास्थलमै मृत्यु भइसकेको छ ।
आफन्तका अनुसार करनसिंहको शव विमला अड्किएको ठाउँभन्दा करिब २ सय मिटर पर भेटिएको थियो । उनी बसमुनि च्यापिएका थिए । विमलाका अनुसार बसमा खराबी आएको भनेर केही बेर पाटनमा रोकिएको पनि थियो । त्यसको केही समयपछि नै दुर्घटना भएको हो । ‘तिहार माईती घरमा मनाएर काठमाडौं बस्ने गरी आउँदै थियौं,’ उनले भनिन्, ‘लोकसेवाको तयारीसँगै जागिर पनि खोज्ने श्रीमान्को योजना थियो ।’
बसचालक वीरेन्द्र कार्की आफू पनि घाइते छन् । गाडीमा पहिले कुनै खराबी नदेखिएको तर एक्कासि ‘स्टेयरिङ’ अड्किएर बायाँ मोड्न नपाउँदा भिरबाट खसेको उनले बताए । ‘उकालोमा दायाँ भिरको मोडबाट गाडीलाई बायाँतिर मोड्न सकिएन,’ उनले भने, ‘गाडी पल्टिन पुग्यो ।’ उनको पनि मायामेट्रो अस्प्तालमो उपचार भइरहेको छ ।
बैतडीको पाटन नगरपालिका–८ खोडपेमा बिहीबार राति १० बजे भएको उक्त दुर्घटनाका घाइतेमध्ये सात जनालाई मायामेट्रो अस्पताल ल्याइएको छ । बसभित्रबाट निस्कन नपाएकाहरूलाई बढी चोट लागेको छ । दु र्घटनामा ९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ४३ जना घाइते भएका छन् । ना५ख ५१४१ नम्बरको उक्त बस बैतडीबाट महेन्द्रनगरका लागि आउँदै थियो ।-Ekantipur
Prevमोरङका १७ बर्षीय गणेश जसको तौल १३० केजी ! (भिडियो सहित)
Nextरुखबाट लडेर घाइते भएकी धनकुटाकी महिलामा कोरोना पुष्टी, उपचारको क्रममा मृत्यु
यिनै हुन महान संजय जसले ब,x ला, त्का, र पछि ह, xत्या गरीएका ६ बर्षिय बालिकाको निम्ति न्या, य माग्दा अ, का, लमै ज्या, न गु, माए
मलेसियामा फेरी सुरक्षा गार्डमा कार्यरत पुर्ण सिंह रावत को सुतेकै ठाउँमा निधन
नेपालमा रहेको बिश्वकै लामो झोलुङगे पुल चो,रहरुको चो,री गर्ने अ,खडा बन्दै!
इराकमा दुवै मृगौला फेल भएर उपचार गराइरहेका नेपाली युवा दीपकको उपचारका क्रममा निधन
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (126358)
यस्ता थिए लाहुरे र स्मिताका रमाइला टिकटक जुन यादमै सिमित रहेदेशै रुवायो हेर्नुस भिडियो (96695)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (73797)
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (68999)
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (64087)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (54886)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (49928)
समाचार युवा नेता रामकुमारी झाक्री घा’इ’ते युवाहरु आ’क्रो’शित ( हेर्नुहोस् भिडियो ) (43692)
भर्खरै हेर्नुस भा’गीरथीको ह,त्यारा लाई यस्तो अवस्थामा प्रह’री द्वारा के गरियो, भिडियो सहित (43549)
खुसिको खबर – सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै बढ्यो वृद्धभत्ता !!! (41813)
अब कस्को एमाले ? तिवारी नेतृत्वको एमालेले बोलायो बैठक
नेकपा (एमाले) ब्युँझिएपछि दे’शभर यसरी मनाईँदैछ खु’शीयाली
प्रचण्डले दुबईमा ४१ अर्ब रकम लुकाएको खुलासाको भिडियो भाइरल (भिडियो सहित)
कन्चनको मृ’त्यु भएपछि अनिशाको घरमा तो’डफोड लगाएत आगजनी…
गोहीको पेट चिरेर निकालियो ८ वर्षका बालक